Wasiir hore oo gargaar caafimaad ka codsaday Dowladda Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir hore oo gargaar caafimaad ka codsaday Dowladda Somalia
4th February 2016 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Wasiirkii hore ee caafimaadkii xukuumaddii KMG aheyd ee uu R/wasaaraha ka ahaa Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) oo ku xanuunsanaya Muqdisho ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya iney u qaaddo caafimaad debadda ah.
Dr. Aadan Xaaji Ibraahim oo xilligii Farmaajo noqday wasiirkii caafimaadka oo uu hayo xanuun xagga beerka ah, islamarkaana ku jira Isbitaalka Reccep Tayib Erdogan (Digfeer) ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya iney ku caawisyo in loo qaado isbitaal debadda ah, maadaama uu yahay wasiir soo qabtay shaqo qaran.
Dhaqaatiirtka Isbitaalka Reccep Tayib Erdogan (Digfeer) ayaa la sheegay iney ku wargeliyeen Dr. Aadan Xaaji Ibraahim inuu u baahan yahay isbitaal debadda oo ka qalab iyo dawo sarreeya kan uu hadda ka jiifo Muqdosho.
Wasiirkaan hore ayaa la sheegay iney isbitaalka uu hadda jiifo geeyeen Ururuka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, waxaana dowladda Soomaaliya laga sugayaa iney codsigaas ka jawaabto.
Warbaahinta & Bulshada Rayidka ah oo wargelin cusub loo diray
Malaysian ambassador to Switzerland dies